Telegram 5.10.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.10.0 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
Application မ်ား ဆက္သြယ္ေရး Telegram
Telegram ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
စင်ကြယ်သောလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ - ရိုးရှင်းတဲ့အစာရှောင်ခြင်း, လုံခြုံ, လူအပေါင်းတို့သည်သင်၏ devices တွေကိုဖြတ်ပြီးတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်။ လေးနှစ်အတွက်သန်း 200 ကျော်တက်ကြွအသုံးပြုသူများသည်။
Fast: ကြေးနန်းဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းဒေတာစင်တာများတစ်မူထူးခြားတဲ့, ဖြန့်ဝေကွန်ယက်ကိုကနေတဆင့်လူတွေကိုဆက်သွယ်, စျေးကွက်အပေါ်အမြန်ဆုံး messaging app ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်: သင်တစ်ကြိမ်သာမှာအားလုံးသင့်ရဲ့ device များအနေဖြင့်သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာစာရိုက် Start နှင့်သင့်တက်ဘလက်သို့မဟုတ်လက်တော့ပ်ကနေမက်ဆေ့ခ်ျကိုပြီးအောင်လုပ်ပါ။ နောက်တဖန်သင့်ရဲ့ဒေတာကိုဆုံးရှုံးဘယ်တော့မှမ။
Unlimited: သင်ကသူတို့အမျိုးအစားနှင့်အရွယ်အစားပေါ်မဆိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, မီဒီယာနဲ့ဖိုင်တွေပေးပို့လို့ရပါတယ်။ သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကို Chat history ကိုသင့်ရဲ့ device ကိုမ disk space ကိုတောင်းမည်, နဲ့လုံလုံခြုံခြုံနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကလိုအပ်အဖြစ်များအတွက်ကြေးနန်းမိုဃ်းတိမ်၌သိုလှောင်ထားလိမ့်မည်။
Secure: ကျနော်တို့ကအသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်အကောင်းဆုံးကိုလုံခြုံရေးပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ စသည်တို့ကိုချတ်, အုပ်စုများ, မီဒီယာအပါအဝင်ကြေးနန်းအပေါ်အရာအားလုံးအဓိကလဲလှယ် secure 256-bit နဲ့အချိုးကျတဲ့ AES encryption ကို, 2048-bit နဲ့ RSA encryption ကိုနှင့် Diffie-Hellman တို့ပေါင်းစပ် အသုံးပြု. encrypted ဖြစ်ပါတယ်။
Power: သင် (စသည်တို့ကို .doc, .MP3, .zip) ကြီးမားသောဗီဒီယိုများ, မည်သည့်အမျိုးအစားစာရွက်စာတမ်းများမျှဝေအထိ 200,000 အဖွဲ့ဝင်များကအုပ်စုချတ်ဖန်တီးဖို့နဲ့တောင်သတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်ငန်းများကိုအဘို့အ bot တွေဟာတက်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အွန်လိုင်းစအသိုင်းအဝိုင်း hosting နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုညှိနှိုင်းများအတွက်စုံလင်သော tool တစ်ခုပါ။
ယုံကြည်စိတ်ချရသော: တတ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံး bytes ၌သင်တို့၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုကယ်နှုတ်တည်ဆောက်ကြေးနန်းအစဉ်အဆက်ကိုဖန်ဆင်းအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောစာတိုပေးပို့ရေးစနစ်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာပင်အနည်းဆုံးမိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုအပေါ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
FUN: ကြေးနန်းအစွမ်းထက်ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ် tools များရှိပြီးအားလုံးကိုသင့်ဖော်ပြလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်တင်းဖို့ပွင့်လင်းစတစ်ကာ / GIF ကိုပလက်ဖောင်း။
လွယ်ကူရှင်းလင်း: အင်္ဂါရပ်များမကြုံစဖူးခင်းကျင်းပေးနေချိန်မှာကျနော်တို့သန့်ရှင်းတဲ့ဟာ interface ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အကြီးအစောင့်ရှောက်မှုယူပြီးနေကြသည်။ ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူ, ကြေးနန်းပိန်ကြုံခြင်းနှင့်သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်။
100% အခမဲ့ & ကြော်ငြာမပါ: ကြေးနန်းအခမဲ့ဖြစ်ပြီးအမြဲအခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကြော်ငြာတွေရောင်းချသို့မဟုတ် subscription ကိုအခကြေးငွေမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ကြသည်မဟုတ်။
ပုဂ္ဂလိက: ကျနော်တို့အလေးအနက်ထားသင့်ရဲ့ privacy ကို ယူ. တတိယပါတီများမှပေးဘယ်တော့မှသင့်ရဲ့ဒေတာကိုမှရယူသုံးပါ။
အများဆုံး privacy ကိုစိတ်ဝင်စားသူတို့အဘို့, ကြေးနန်းလျှို့ဝှက်ချတ်များပေးထားပါတယ်။ လျှို့ဝှက်ချက် Chat ကိုမက်ဆေ့ခ်ျနှစ်ဦးစလုံးပါဝင်ပစ္စည်းတွေကနေအလိုအလြောကျ Self-ဖျက်ဆီးဖို့အစီအစဉ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းကိုသင်အကြောင်းအရာပျောက်ကွယ်အမျိုးအစားအားလုံးကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ် - မက်ဆေ့ခ်ျများ, ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, နှင့်ပင်ဖိုင်များကို။ လျှို့ဝှက်ချက်ချတ်များတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုသာ၎င်း၏ရည်ရွယ်လက်ခံရရှိသူကဖတ်ပါနိုင်သေချာစေရန်အဆုံးမှအဆုံးသို့ encryption ကိုအသုံးပြုပါ။
ငါတို့သည်သင်တို့ဟာ messaging app ကိုနှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်များ၏နယ်နိမိတ်ချဲ့ထွင်စောင့်ရှောက်လော့။ ကြေးနန်းနှင့်အတူတက်ဖမ်းရန်အဟောင်းများကိုသံတမနျအတှကျအနှစ်စောင့်ဆိုင်းမနေပါနဲ့ - ယနေ့တော်လှန်ရေး join ။
Telegram အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Telegram အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Telegram အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Telegram အား အခ်က္ျပပါ
torchbearer စတိုး 629 192.65k
Telegram ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Telegram အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.10.0
ထုတ်လုပ်သူ Telegram LLC
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://telegram.org/privacy
လက်မှတ် SHA1: 97:23:E5:83:86:12:E9:C7:C0:8C:A2:C6:57:3B:60:26:D7:A5:1F:8F
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Nikolay Kudashov
အဖွဲ့အစည်း (O): VK
နယ်မြေ (L): Saint-Petersburg
Telegram APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ